Baahin: Axad, May 13, Axmed Sh. Maxamed ~ Daljir ~ Bossaso. Maxkamada darajada 1-aad ee Bossaso oo dil ku xukuntay Dooxajoog; R/wasaare Gaas oo booqday madasha shirka ee madax dhaqameedka Somalida; Puntland oo sheegtay in la marin habaabiyey dastuurka Somaliya; Kontomeeyo maxaabiis Somali ah oo laga sii daayey xabsiyo ku yaal Tanzania. – Radio Daljir